Nidaamka Khaaska ah | Abaalmarinta Abaalmarinta - Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn Resources Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Nidaamkan asturnaanta wuxuu qeexayaa sida ay Hay'adda Reward Foundation u isticmaasho una ilaaliso wixii macluumaad ah ee aad siiso Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta Marka aad isticmaaleyso degelkan. Abaalmarinta Abaalmarinta waxaa ka go'an inay hubiso in asturnaantaada la ilaaliyo. Haddii aan kaa codsanno inaad na siiso macluumaad gaar ah oo lagu garan karo markaad isticmaaleyso degelkan, markaa waa laguu xaqiijin karaa in loo isticmaali doono oo keliya iyadoo la raacayo bayaanka asturnaanta. Hay'adda Reward Foundation waxay badali kartaa siyaasaddan waqti ka waqti iyadoo cusbooneysiineysa boggan. Waa inaad hubisaa boggan waqti ka waqti si aad u hubiso inaad ku faraxsan tahay wixii isbeddel ah. Nidaamkani wuxuu dhaqan galayaa laga bilaabo 23 Luulyo 2020.
Magacyada dadku ku soo biireen MailChimp
Magacyada dadka ka diiwaangalinaya koontada 'The Reward Foundation shop'
Kala xiriir macluumaadka ay ku jiraan cinwaanka iimaylka iyo feylka twitter
Kala xiriir macluumaadka shakhsiyaadka ama ururada wax ka iibsada alaabo ama adeegyo
Macluumaadka kale ee la xariirta si loo maamulo boggan
Kukiyada. Wixii macluumaad dheeraad ah, ka eeg Siyaasadda cookie
Waxaan u baahanahay macluumaadkan si aan uga jawaabno su'aashaada, si aan kaaga iibinno alaab ama adeegyo dukaankayaga, si aan kuu siino warside haddii aad is qorto iyo falanqaynta gudaha ee loogu talagalay xayeysiinta ama ujeedo suuqgeynta.
Haddii aad rabto inaad ka saarto rukhsadeynta Wargeyskeena, waxaa jira nidaam otomaatig ah oo aad adigu joojiso inaad ka hesho waraaqo dheeri ah Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta. Haddii kale waxaad nagala soo xiriiri kartaa bogga "La soo xiriir" waxaanan xaqiijin doonaa ka saaristaada liiska.
Dukaanka ayaa ku siinaya hanaan aad ku tirtirto xisaabtaada. Ka dib waxaan tirtiri doonnaa dhammaan xogta shaqsiyadeed ee la xiriirta xisaabtaas.
Waxaa naga go'an in ay hubiso in aad macluumaad waa aamin. Si looga hortago haysani ama siidaynta, aan ku riday meel nidaamka ku haboon jirka, electronic iyo maareynta si loo ilaaliyo iyo aamin macluumaadka aan online ururiyaan.
Our website ku jiri kara xiraya boggag kale oo xiiso leh. Si kastaba ha ahaatee, mar aad u isticmaashay xiriiriye inuu ka tago our site, waa inaad ogaataa in aynaan haysan wax gacanta website in kale. Sidaa darteed, waxaan ka mas'uul ah ilaalinta iyo u gaarka ah ee macluumaad kasta oo aad bixiso halka booqanaya goobaha sida iyo meelaha sida aan maamulaa war gaarka this ma noqon karaan. Waa in aad taxaddar iyo la eego warbixinta qoraalka gaarka ah lagu dabaqi karo in website-ka in su'aal.
Waxaad codsan kartaa faahfaahinta macluumaadka shaqsiyeed ee aan kaa hayno adiga oo hoos imanaya Sharciga Ilaalinta Macluumaadka 1998. Lacag yar ayaa la bixin doonaa. Haddii aad jeclaan lahayd nuqul ka mid ah macluumaadka la hayo fadlan u qor Hay'adda Reward Foundation c / o The Melting Pot, 5 Rose Street, Edinburgh, EH2 2PR United Kingdom. Haddii aad aamminsan tahay in macluumaadka aan kaa hayno aanu sax ahayn ama uusan dhammeystirnayn, fadlan warqad ama email ugu dir sida ugu dhaqsaha badan, cinwaanka kor ku xusan. Waxaan si dhakhso leh u saxi doonaa macluumaad kasta oo lagu helo inuu khaldan yahay.
Dukaanka Abaalka Abaalmarinta
Waxaan ururinaa macluumaadka adiga kugu saabsan inta lagu gudajiro nidaamka hubinta ee Dukaankeena. Waxyaabaha soo socdaa waa sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan sida aan u maareynay geedi socodka siyaasadaha asturnaanta gudaha Dukaanka.
Waxa aan soo uruurineyno
Inta aad booqanayso boggayaga, waanu raadin doonaa:
Waxyaabaha aad aragtay: waxaan u isticmaali doonaa tan, tusaale ahaan, waxaan ku tusinaynaa alaab aad dhawaan soo aragtay
Goobta, cinwaanka IP iyo nooca browser: waxaan u isticmaali doonaa tan ujeedada sida qiyaasidda canshuurta iyo maraakiibta
Cinwaanka Gaadiidka: Waxaan ku weydiin doonaa inaad gashid tan si aan u sameyn karno, tusaale ahaan, qiyaasaan maraakiibta ka hor inta aanad amar bixin, oo aan kuu soo dirno amarka!
Waxaan sidoo kale u adeegsan doonnaa cookies si aan ula soconno waxyaabaha ku jira dambiisha inta aad internetka ku gudajireyso.
Marka aad naga iibsato, waxaan ku weydiin doonnaa in aad siisaa macluumaad ay ka mid yihiin magaca, cinwaanka biilasha, cinwaanka maraakiibta, cinwaanka email, lambarka telefoonka, credit card / faahfaahinta lacag bixinta iyo macluumaad account optional sida username iyo password. Macluumaadkaan waxaan u isticmaali doonnaa ulajeedooyin, sida,:
U dir macluumaadkaaga ku saabsan koontadaada iyo amarkaaga
Ka jawaab codsiyadaada, oo ay ku jiraan lacag celinta iyo cabashooyinka
Hawlgallada lacag bixinta iyo ka hortagga musuqmaasuqa
Ka dhig xisaabtaada dukaanka
U hoggaansamid waajibaadka sharciga ah ee aan hayno, sida xisaabinta canshuuraha
Inay hagaajiyaan iibsigeena dukaamada
Ku soo dir farriimaha suuq-geynta, haddii aad doorato inaad hesho
Haddii aad sameysato koonto, waxaan ku kaydin doonaa magacaaga, cinwaankaaga, emailkaaga iyo lambarka taleefanka, kaas oo loo adeegsan doono in lagu daboolo bixinta amarrada mustaqbalka.
Waxaan guud ahaan keydinaa macluumaadka adiga kugu saabsan illaa iyo inta aan ugu baahan nahay macluumaadka ujeeddooyinka aan u adeegsanno oo aan u isticmaalno, oo sharci ahaan naloogama baahna inaan sii wadno inaan sii wadno. Tusaale ahaan, waxaan kaydin doonaa macluumaadka dalabka muddo 6 sano ah ujeedooyinka canshuurta iyo xisaabinta. Tan waxaa ku jira magacaaga, cinwaanka emaylkaaga iyo cinwaannada biilasha iyo adkeynta maraakiibta.
Waxaan sidoo kale ku keydin doonaa faallooyinka ama faallooyinka, haddii aad doorato inaad ka baxdo.
Yaa ku jira kooxdayada oo ay ku xiran tahay
Xubnaha kooxdeenu waxay heli karaan macluumaadka aad na siiso. Tusaale ahaan, labadaba maamulayaasha iyo Maareeyayaasha Shop waxay heli karaan:
Dalbo macluumaadka sida wixii la iibsaday, markii la iibsaday iyo meesha loo dirayo, iyo
Macluumaadka macaamiisha sida magacaaga, cinwaanka emailka, iyo biilasha iyo macluumaadka maraakiibta.
Xubnaha kooxdayadu waxay heli karaan macluumaadkan si ay uga caawiyaan fulinta amarrada, dib-u-habka lacag-bixinta iyo taageeridda.
Waxa aan la wadaagno dadka kale
Sida ku xusan siyaasadan qaaska ah waxaan macluumaadka la wadaageynaa qeybaha seddexaad ee naga caawiya inaan ku siino amaradeena iyo adeegyada kaydinta adiga; tusaale ahaan PayPal.
Waxaan aqbalnaa lacagaha loo marayo PayPal. Marka la bixinayo lacag bixinta, qaar ka mid ah macluumaadkaaga ayaa loo gudbin doonaa PayPal, oo ay ku jiraan macluumaadka looga baahan yahay in la hirgeliyo ama lagu taageero lacagta, sida wadarta iibsiga iyo macluumaadka biilka.
Fadlan fiiri Siyaasadda Khaaska ah ee PayPal wixii faahfaahin dheeraad ah.